15W Wireless Chaja Inogamuchira Solution
5W Kutumira Chip, Imwe Coil Solution
Isina waya charger inotakurika simba kune nhare mbozha cha ...
Smart Desk isina waya charger yefoni nhare muDiff ...
Smart Yakabatanidzwa Yekukurumidza Bhatiri Chaja yeMagetsi V ...
EV Smart 44kW Chaja ine mbiri Type 2 plug yekuchaja yeruzhinji chiteshi
Chigadzirwa Chigadzirwa Inoenderana nemaindasitiri zviyero, iyojaja inoshandisa MID yakasimbiswa mita kuti ive nechokwadi chekuita uye yakavakirwa-muRCD kuchengetedza kuchengetedzeka. Iyojaja zvakare inosanganisira 6mA DC kuburitsa kubatika, iyo inobvisa kudikanwa kwemutengo unodhura-unodhura weRCD yerudzi B. Mataja mazhinji eruzhinji munzvimbo imwechete anogona kubatanidzwa munetiweki neine chete internet kutaurirana kubatana. Kutenda kuvhura protocol OCPP 1.6, iyo charger mashandiro uye chinzvimbo chinotariswa uye kudzorwa nevepo ba ...
Chaja isina waya Ine Ruzha Bhokisi Bhuruu Tooth Kubatanidza
Chigadzirwa chigadzirwa Product cation Chigadzirwa zita: Wiri isina waya yekuchaja mutauri Model No: X7101 yekuisa: DC5.0V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A Kubuditsa: Max 10W Kutengesa kure: ≤8mm Rudzi rwemhando: Smart bluetooth odhiyo Mutauri: 1.5〃.4 ohms Ruzha: 95dBA Makaralı vhezheni: Jerry2.1 + EDR Kunzwisisa: 350MV Ruvara: Nhema Chigadzirwa Chinhu Chisina waya Kutaurisa Bluetooth mutauri Wireless kuchaja Bluetooth playback Maoko-emahara kufona nhare rutsigiro Izwi rekukurumidza Ziva: Ichi chigadzirwa chakakodzera chete nhare mbozha uye sma ...
Inotakurika Chikamu 2 EV Machaja ane Mode 2 Chaja
ZviratidzoKushandisa Nyore Plug & kutamba, nyore oparesheni Yazvino gadziridza nesinple pinda pane bhatani Kukwidziridzwa kukuru Max 7.4kw kuchaja simba Inotakurika uye inokwana Charge EV yako chero nguva uye chero kupi Kwakavimbika & kwakachengeteka TUV & CE inogamuchirwa yepamusoro mhando Zvakanakira anogadziriswa Max 7 nhanho kuchaja ikozvino kusarudzwa Ruvara screen Ratidza chaiyo-nguva yekuchaja chinzvimbo Solid dhizaini Yakasimba tambo chengetedzo Kudonhedza & Kupwanya resistan ...
NY7501G-1 chinhu chakabatanidzwa chakatumira chip yechaja isina waya yakagadzirwa kubva paNY7501G. NY7501G isina waya yekuchaja chipset rudzi rwekutumira chip yekuchaja isina waya inoenderana neQi standard yeWower Power Consortium (WPC), iyo inogona kuwana simba re5W rekutepfenyura yechaji isina waya. Yakapakirwa muQFN44-0505X075-0.35, inosanganisirwa mukati nekuratidzwa kwekuratidzira, pamwe nekudzivirira kwakawanda. Inotaridzwa nechinhu chekunze dete ...
EV Fast Charger DC60kw neCCS CHaDEMO Tambo dzeEV Kutengesa Chiteshi
Chigadzirwa Chigadzirwa Newya Technology ine chizvarwa chitsva chemapfumo ekuchaja akangwara eiyo nyowani simba ecology. Kubva pane yakadzika midzi yekuchaja murwi zvakazvimiririra zvakatsvagiswa uye zvakagadziriswa neLINUX, ndiyo yekutanga yekuona isina musono mukana weInternet yezvinhu uye maguta akangwara. Advantage Newyea's DC inokurumidza majaja akagadzirirwa kukurumidza, nyore kubhadharisa ese emagetsi emagetsi mamodheru, kusanganisira iwo akashongedzerwa neakakwira voltage mabhatiri masisitimu. Iyo Newyea's compact si ...
Chigadzirwa Zvinyorwa1. Isa Scope Iyi isina waya charger inogamuchira module tsananguro ichaiswa kune Wireless charger 15W. Kunzwa daro risingasviki 10mm 2. Nharaunda Dziviriro Mitemo: RoHS 3. Zvinoenderana neKuchengetedza uye EMC Criterion: WPC 1.2 4. Kudzivirirwa uye EMC Kubvumidzwa: CE / FCC 5. Magetsi Hunhu: Bvunzo wedunhu Kana bvunzo ichaitwa pane yakatarwa dunhu, ive shuwa kushandisa inotevera dunhu. 6. 15w isina waya yekuchaja inogamuchira YeMabasa Maitiro: Electromagnetic indu ...
EV Wallbox Imbajajaja AC 3.5KW yeEV Kutengesa
Zvirongwa: Simple kuchaja Plug uye iri nyore kutamba iri nyore kwazvo kumashandisirwo epamba Real-nguva Ratidza Voltage yazvino, nguva, chinzvimbo, mhosva uye simba. Tarisa uone uchaziva zvese! Yakanyanya Yakabatanidzwa Yakanyanya kubatanidzwa uye compact dhizaini inoita kuti Kugadziriswa uye kuendesa kuve nyore Zvimwe chengetedzo Iyojaja inosanganisira pamusoro-pari zvino, pamusoro pemagetsi, kuwedzera, yakaderera magetsi, kudzivirira leakage uye DC kuchengetedza. MakomboreroLCD screen 4.3 ”super screen, inogona kutarisa ruzivo rwechidzitiro zviri nyore. Chinja dhizaini Plug mukati, ipapo chinja ca ...
Smart Yakabatanidzwa Yekukurumidza Bhatiri Chaja yeMagetsi Mota DC283 KW Yekukurumidza Chaja
Chigadzirwa Chigadzirwa Simba rinoburitsa kusvika pa240KW DC ine GB / T, IEC62196-3 (Combo 1 / Combo 2) pfuti 94% kushanda nesimba Wired uye isina waya kubatana kweCMS. Mushandisi ane hushamwari LCD kuratidza kwevatengi interface. ID 55 Chiteshi chekunze chekunze Advantage Newyea DC280KW yakanakira mabhizinesi ari padyo nepakati penzira nemigwagwa mikuru yekupa vatyairi veEV nekuchaja nekukurumidza-kutendeuka, inogona zvakare kushandiswa kunzvimbo dzebasa, ichipa vashandi nzira yekukurumidza kukwira pavanenge vachida. Mbeu dzakauchikwa mennekes AC ...
EV Wallbox Imba Pro Chaja AC7KW yeEV kuchaja
ZvimiroFlexible multi-protocol yakagadzirirwa: CCS, CHAdeMO, GB / T, Yekuchaja Protocol: OCPP1.6, Wired / isina waya kubatana kweCMS. Mushandisi ane hushamwari LCD kuratidza kwevatengi interface. IP54 yekuchaja yekunze chiteshi. Inogona kupa michina yekuchaja inosangana nematanho akasiyanasiyana uye kugadzirisa sezvaunoda. Kubatsira Iyo Newyea AC wallbox ndiyo inogadzira uye yakakosha-yakakosha imba charger pamusika. Iyo inonunura yakasarudzika mhando inotarisirwa kubva kumutungamiriri wepasirese mune charg ...
Ultrafast EV Kubhadharisa neYakabatanidzwa Energy Kuchengetedza DC160KW EV Yekukurumidza Chaja
Chigadzirwa Chigadzirwa Inoenderana neCCS, ChadeMO uye GB / T, IEC62196-3 (Combo1 / Combo2) pfuti. 94% simba rinoshanda. Wired / Wireless yekubatanidza yekubatanidza neCMS. Mushandisi ane hushamwari LCD kuratidza kwevatengi interface. IP55 yekuchaja yekunze chiteshi. Advantage Newyea DC160KW inosangana nezvinodiwa zvezviitiko zvakasiyana, Guta rekuchaja Nzvimbo: Iyo Newyea DC inokurumidza charger inogona kupa inokurumidza "kuzadza" ichiwedzera 100 km (62 mi) renji mune zvishoma kubva pa15-25 maminetsi. Retail / Shopping Center: Newye ...
EV WallBox Pro-Smart Chaja AC7KW ine APP Kudzora
Zviripo: Rakajaini plug Plug uye zviri nyore kutamba zvirinyore chaizvo Real-nguva Ratidza Voltage yazvino, nguva, chinzvimbo, mhosva uye simba. Tarisa uone uchaziva zvese! Yakanyanya Yakabatanidzwa Yakanyanya kubatanidzwa uye compact dhizaini inoita kuti Kugadziriswa uye kuendesa kuve nyore Zvimwe chengetedzo Iyojaja inosanganisira pamusoro-pari zvino, pamusoro pemagetsi, kuwedzera, yakaderera magetsi, kudzivirira leakage uye DC kuchengetedza. Super screen 4.3 ”super screen, inogona kutarisa ruzivo rwechidzitiro zviri nyore. Chinja dhizaini plug mukati, ipapo switch inogona kutanga kana ...
Newyea R&D nzvimbo inoumbwa nevaporofesa, vanachiremba, masters, uye mainjiniya ekumba nekune dzimwe nyika, vachitarisa kuvandudzwa kweterevhizheni uye wired smart smart yekuchaja tekinoroji yemagetsi emagetsi, diki uye epakati simba tambo isina waya yekuchaja tekinoroji uye mhinduro nyowani, inofukidza 10,000 mativi emamita akazvimirira. R & D chivakwa chehofisi neR & D murabhoritari zvinoenderana neyepasi rose-kirasi zviyero zvinoshandisa mutengi system hunyanzvi modhi, kuunza vatengi kune ese maficha ...